Hevitra MPANOHARIANA | Ankapobeny | 14
2011-09-28 @ 21:46 in Ankapobeny
Toe-draharaha andro iray mialoha ny fitsenana manetriketrika ny filohan'ny FAT avy any amin'ny fivorian'ny ONU. Samia mamakafaka!
(1?) : Misy tohiny na misy ho tratra hafa ihany koa ve?
Jentilisa 28 septambra 2011
Nadine Ramaroson : Fahafatesana tsy mazava?
2011-08-29 @ 00:29 in Ankapobeny
Ankona ihany ny tena raha nahare taorian'ny fahafatesan'ny mpanao gazetin'i Midi Madagasikara iray, Stephane Jacob, fa nodimandry ihany koa ny minisitry ny mponina avy ao amin'ny Fitondrana Avon'ny Tetezamita Rtoa Nadine Ramaroson ny andron'ny alahady 28 Aogositra 2011. Voalaza fa lozam-pifamoivoizana an-dranomasina no nahazo azy ka izao nindaosan'ny fahafatezana azy sy mpiara-miasa aminy akaiky izao rehefa avy nanatrika fety tao amin'ny Nosy Ibrahim na Ste-Marie.
Ilay nahafatesany amin'izay no mahavaka ny saina: Tsy fitandremana ve? Voalaza fa anisan'ny mampidi-doza indrindra io vinany nahafatesany io (Soanierana Ivongo) satria fihaonan-dranomasina sy ranomamy. Mety hamitaka ny fitonian'ny ranomasina tazamaso amoron-drano fa mety hisy onja hisamonta tampoka rehefa eny afovoan-drano ianao. Efa nisy ny olona matin'ny loza mitovitovy amin'izao eo amin'io faritra io ihany. Ny tampoka tsy maha-lehilahy hoy ny fitenenana. Marihina fa mahay milomano Rtoa minisitra avy ao amin'ny FAT saingy izay angaha ny androny.
Fipoahana nahafatesana mpamonjy voina ihany koa: Gazety iraisam-pirenena no nahitana fa nisy olona fito maty raha saiky hamonjy ny lakana izay nandehanany noho ny fipoahana nitranga. Eo no nisy tsy mazava tsara, inona ilay fipoahana na fipoahan'inona ilay izy? Noho izy olona politika mihitsy no niteraka ilay fanontaniana. Ao an-tsaina avy hatrany manko ny hoe sao dia nisy namono kosa?
Tamin'ity volana aogositra ity indrindra dia nisy fanazavana nosoratany tao amin'ny kaontiny Facebook fa nisy fifanolanana teo aminy sy ny Lehiben'ny zandary faritra Analamanga tarihin'ny Jeneraly Ravalomanana. Resaka fisamborana ny mpiara-miasa aminy noho ny resaka tany any Faharetana no nahatonga azy nanoratra somary lavalava ihany. Ny fokonolona ao an-toerana sy ny orinasa Bionexx moa no nifanolana amin'izy io.
NIlaza ny namana Alain Rajaonarivony fa an'ilay Karana malaza antsoina hoe Akbaraly io orinasa Bionexx io. Tsy fantatro moa na marina izany na tsia fa ny anarana Charles Giblain no hitako ho Tale Jeneraliny ary manana tetikasa iarahana amin'ny AFD (Agence Francaise de developpement) ilay orinasa. Hitako tamina fitadiavana mpiasa moa fa ao amin'ny Immeuble Injet Ambodivona no karazana foibeny eto Madagasikara. Tsy dia midika inona moa izay nambarako izay fa mba antsipirian-javatra tsikaritra fotsiny.
Ny mahalasa ny fanontaniana kosa dia ny nanaovan'ny Lehiben'ny Zandary faritra Analamanga ity tranga izay tsy tao anatin'ny fari-piadidiany ity. Hatraiza tokoa moa izany ny fahefany? sa mailo noho ilay fifanolanana madinika vao nitranga tamin'ity volana aogositra ity?
Inona kosa ny mampalaza ity Rtoa nodimandry ity? Miseho ho akaikin'ny vahoaka madinika izy ary manampy azy ireny tokoa amin'ny fanaovana tolotolotra. Na manao izany aza ity dia tsy mba hita miaraka amin'ny Association Fitia izay tantanin'ny vadin'ny filohan'ny FAT (fa toa mifaninana aza ve?). Nisy aza fotoana mitsidika tampoka any amin'ireny tsy manankialofana ireny izy, amin'ny andro alina, mamoha azy ireny ary mizara mivantana ny sakafo entiny.
Etsy ankilany kosa dia maro no manana ahiahy noho izy maika tamin'ny fanalalahana kokoa indray ny fananganan'ny vahiny zaza rehefa naato izany nandritra ny fitondrana teo aloha noho ny ahiahy fangalaran-jaza. Ampangain'ny mpanenjika azy ho miara-miasa amin'ny mpangala-jaza moa izy noho izay fihetsika nataony izay. Raha 3 monja manko, ohatra, ny zaza malagasy natsangana fianakaviana frantsay tamin'ny 2008 dia niakatra ho 26 izany tamin'ny 2009 ary 37 tamin'ny 2010.
Na izany na tsy izany dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany sy ny olona akaiky azy ny mpanoratra.
Jentilisa, 29 aogositra 2011 02:30 maraina, Antananarivo
Fa iza no tena adala?
2011-08-18 @ 09:33 in Ankapobeny
Tsy mety misy miresaka mihitsy ho'aho ny nolazain'ny gazety iray omaly ny zavatra nolanian'ny lazaina fa solotenam-bahoaka e? Na solotenam-bahoaka aza manko izy ireo dia tsy nofidiany kosa fa dia mahamenatra kosa ilay fanapahan-kevitra. Nolaniana ary fa dia vata iray ihany no androtsahana ny vatom-pifidianana Ben'ny tanàna, mpanolo-tsainan'ny tanàna, Ben'ny faritra ary ny mpanolon-tsainam-paritra. O rey olona e! tsy misy dikany ve izany zavatra izany sa tsy raharahiana izay rehetra avokoan'izy ireo fa tsy misy idirantsika ny amin'izany? Sao dia tsy rariny kosa?
Fari-pifidianana roa tsy mitovy anie no voafaritra amin'ireo fifidianana efatra indray miaraka ireo. Manaraka izany dia impiry handrotsa-bato amin'ny vata iray izany? in'efatra? in-droa? indray mandeha ihany? koa inona ny olana ho ahy raha vato efatra ho an'ny Ben'ny tanàna iray no arotsako ao am-bata? efa vata iray ihany anie e! Sa avela hisosa ho azy fotsiny koa itony efa fahadalana mihoa-pampana itony? Dia rehefa tsy mifidy ny olona dia lazaina fa adalany ny azy nefa zavatra efa tsy izy intsony tahaka izao no miseho? Tena ela ny ela fa famotehana tanteraka ny hasin'ny fifidianana no kasaina atao eto.
Ny teti-panorona ao ambadik'ity raharaha ity manko, araka ny fijeriko, dia fanerena mba ho ny fifidianana Ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsainan'ny tanàna ihany no fidian'ny olom-pirenena mivantana fa ny Ben'ny tanàna sy ny mpanolotsainan'ny tanàna indray no mifidy ny Ben'ny faritra sy ny mpanolotsainam-paritra. Any no tian'ny mpanao politika tsy sahy miatrika safidim-bahoaka tanterahina dia mody ahodina amin'ny hoe vata tokana ihany. Efa nolaniana ary izy io dia akory? Izay ve izany no taratry ny fisainan'ny vahoaka malagasy lazaina fa 20 tapitrisa? Ataovy ihany ny leo politika fa mbola hahita ny tsy fahita hafahafa kokoa isika! Marina e!
Horakoraka ny an'ny sahona?
Dia be indray no tezitra tamin'ny mpiantso amin'ny haino aman-jery sasany nefa etsy ankilany tsy mitsahatra ny manasohaso ny mitondra ny firenena hatrany rehefa nahazo horakoraka ny solotenam-panjakana malagasy hanokatra ny 'Afrobasket men 2011' tontosaina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tezitra fa hoe tsy mahalala fomba sy tsy mahay manaja ny Malagasy. Misy ny gazety dia miampanga avy hatrany ny mpanohana an-dRavalomanana ho ao ambadik'iny siotsioka tao amin'ny Lapan'ny Fanatanjahantena sy ny Kolontsaina iny. KOa raha izany tsy saiky ny ankamaroan'ny mpijery tao ve izany no mpanohana ity haratsiana sy enjehina isan'andro ity na dia efa mialokaloka any ampitan-dranomasina any aza?
Dia nanome sosokevitra moa izy hoe tsy vita ve ny mividy tapakila an'arivony ho an'ny mpanohana azy na mpiray antoko aminy dia mitehaka isaky ny misy azo hanaovana izany mandritra ny kabary. Izany ka soso-kevitra na dia mety ho lafolafo ihany aza. Soa aloha fa tsy tany aho, sady tsy afaka nankany ihany koa noho ny asa, fa raha tsy izany dia nohiraiko teny an-tenantenan-kabary teny ny hira fanevan'ny tolona 1947 'Madagasikara Tanindrazanay'... indrisy moa fa tsy ho afaka hanatrika mihitsy aho fa amin'ny fahitalavitra ihany no mba mijery.
Na izany na tsy izany efa niomana tamin'ireny tranga ireny ny Jeneraly Albert Camille Vital, sady miaramila rahateo ny tenany. Efa fantany fa tsy maintsy hisy ny horakoraka hitsena azy. Notohizany ihany ny kabariny ary dia vitany soa aman-tsara. Misy rahateo ny hira fanaon'ny miaramila hoe 'Horakoraky Rasahona, tsiboboka no tompon'ny rano'. Tsy misy milaza an'izatsy na izaroa ho Rasahona sy Tsiboboka akory na izany aza fa dia hira ihany ireny ho fampaherezana izay iharan'ny horakoraka sy tsy ho taitra ny amin'izany.
Jentilisa, alakamisy 18 aogositra 2011
«Mialoha 1 2 3 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 36 37 38 Manaraka»